Abavelisi bezixhobo zekhompyutha - Abathengisi beekhompyuter baseChina kunye neFektri
Iskena umatshini wekhowudi yomfundi wekhowudi yokuskena ngokuzenzekelayo 1d 2d ibhakhowudi yeskena sebhakhowudi kwivenkile
Kwimizi-mveliso yeetekhnoloji yokuskena ibhakhowudi, Ingqondo iphuhlise iintlobo ngeentlobo zeemveliso zokuSkena iiNjini, iiSkena eziMileyo, iZikena eziHanjwa ngesandla, kunye neeSkena zeDesktop. I-OEM ikwafumaneka ngesicelo.
Ukusetyenziswa kwaMandla asezantsi UDP / CoAP NB-IoT Imodyuli yoNxibelelwano engenazingcingo
ukuvuka kwi-DTU ngedatha ye-serial kungena kwimeko edibeneyo kwangoko, inethiwekhi ebonakalayo, iqonga lefu le-IoT lixhaswe, umyalezo utyhalelwa yi-WeChat
I-MDN211 NB-IoT DTU sisiphelo esigxunyekwe ngokusekwe kwi-NB-IoT yokuhambisa idatha ngaphandle kwamacingo, ivolumu encinci, izibuko elilula, abasebenzisi banokuyidibanisa ngokulula kwibhodi yabo yomama; xhasa i-intanethi, i-IDLE, inqanaba lePSM, fumana amandla okusetyenziswa asezantsi ngeeA ezimbalwa; Inkxaso yenethiwekhi ye-UDP, ukubonelela ngemowudi yokuhambisa idatha esekuhleni ngokupheleleyo kubasebenzisi; Ipakethi yokubetha kwentliziyo eyenziwe ngokwezifiso, ipakethe yokubhalisa, i-header; Xhasa i-IoT Cloud yethu yokuzakhela ngaphandle kokwakha iseva ngabasebenzisi; Ukuxhasa ngokupheleleyo i-SCADA yamashishini, abasebenzisi akufuneki bakhathalele umthetho olandelwayo wenethiwekhi, ngokuhambisa nje okucacileyo okupheleleyo ungafezekisa ukuthumela kunye nokufumana idatha ngaphandle kwamacingo, ukwenza isixhobo sakho sixhumane kwi-Intanethi ngaphandle komda wexesha okanye indawo.
Ukusetyenziswa okuphantsi kwebanga loshishino nb iot unit terminal terminal rtu
I-CoAP / i-China Telecom i-NB-IoT yeLifu / yokuSebenza kweBanga lezeMveliso / oQhelekileyo oSetyenziswa nge-DI / DO